Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » IFransi ibhengeza iseti entsha yezithintelo ze-COVID-19
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UMphathiswa wezeMpilo waseFransi, u-Olivier Veran
Ukuqala ukusukela kule veki, iimaski ziya, kwakhona, zinyanzeliswe kuzo zonke iindawo zangaphakathi eFransi kwaye, ngexesha leholide, kwiimarike zangaphandle zeKrisimesi.
Umphathiswa wezempilo waseFransi, UOlivier Veran, namhlanje ibhengeze iseti entsha yezithintelo zelizwe lonke ezichasene ne-coronavirus eyenzelwe ukuchasa iliza lesihlanu le-COVID-19.
Ngokomphathiswa, amanyathelo amatsha, abandakanya ukufuna iimaski kwiindawo zangaphakathi kunye nokuyalela bonke abantu abadala ukuba bafumane i-booster shot ukuze baphumelele impilo yabo, yinxalenye yomzamo wokuthintela isipike kwi-COVID-19 esibhedlele kunye nokufa ngaphandle kokubuyela eFrance. kwi lockdown.
Ukuqala ngoMgqibelo, ngoNovemba 27, bonke abantu abadala Fransi baya kulungela ukufumana isitofu sogonyo lwe-COVID-19, kwaye kufuneka nge-15 kaJanuwari ukuqinisekisa ukuba ukupasa kwabo kwezempilo kuhlala kusebenza.
Abantu abangaphezu kweminyaka engama-65 sele bexelelwe ukuba bafumane iyeza labo lesithathu le-COVID-19 lidutyulwe nge-15 kaDisemba.
Njengoko imile, iipasile zempilo ziyafuneka Fransi ukufikelela kwiindawo zangaphakathi, ezifana neendawo zokutyela kunye neebhari.
unobangela wongeze ukuba urhulumente akasayi kuphinda alwamkele uvavanyo olubi oluthathwe kwiiyure ezingama-72 zokufika njengenye indlela yokudlula kwi-COVID. Endaweni yoko, uvavanyo olubi lwe-COVID kuya kufuneka ukuba luthathwe kwiiyure ezingama-24 zokungena.
Ngaphandle kwamanyathelo amatsha, uMphathiswa wezeMfundo uJean-Michel Blanquer ugwebe ukuvalwa kwezikolo ukuba bafumana ukuqhambuka kwe-COVID-19, esithi endaweni yoko abafundi baya kuvavanywa nje.
Fransi ubone iimeko ze-COVID-19 zonyuka kwezi veki zidlulileyo, kunye ne-32,591 yosulelo olutsha olurekhodwe ngoLwesithathu.
Ngaphandle kwe-76.9% yabemi baseFrance begonywe ngokupheleleyo kwi-COVID-19, izinga lezehlo zelizwe lifikelele phantse kuma-200 usulelo olutsha kwi-100,000 yabantu.